Other News | Artist Khabar | Page 4
Other News	‘बाहुबली २’ मा देखिनेछन् शाहरुख खान पनि	फागुन, काठमाडौं । सर्वाधिक चर्चासँगै कमाएको चलचित्र बाहुबलीको सिक्वयलमा स्टार शाहरुख खान पनि देखिने भएका छन् । साथै 'बाहुबली'मा दक्षिण भारतीय फिल्मका सूर्या तथा मोहनलाल जस्ता ठूला स्टारहरू देखिने बताइएको छ । अब दक्षिण भारतीय स्टार र बलिउडबाट शाहरूख खानले चलचित्रमा बिशेष भुमिका निभाउने छन् ।
चलचित्रमा शाहरुखको कस्तो भुमिका हुने बारे..	१४ फ्रेबुअरीः प्रेम कथा (भिडियो)	फागुन, काठमाडौं । आज १४ फ्रेबुअरी अर्थात् ‘भ्यालेनटाइन–डे’ । यो दिनमा प्रेमी प्रेमीकाले एक अर्कामा उपहार आदानप्रदान गरेर माया साटासाट गर्ने दिन पनि भनिन्छ । यस्तै ‘भ्यालेनटाइन–डे’ लाई नै मध्यनजर गर्दै प्रेमकथाको बिषयमा बनेको साईलेन्स चलचित्र ‘१४ फ्रेबुअरी’ सार्वजनिक गरीएको छ । जसलाई डिजिटल मिडियाले यु–ट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेको..	अन्जुको प्रेम दिवस गीत ‘जीन्दगीको प्राप्ति तिमी’ (भिडियो)	फागुन, काठमाडौं । गायिका अन्जु पन्तको स्वरमा रहेको प्रेम दिवस बिशेष गीत सार्वजनिक गरीएको छ । ‘जीन्दगीको प्राप्ति तिमी’ बोलको यस भिडियो सहितको सार्वजनिक गीतमा प्रेमको भाव झल्किएको देखिन्छ । अन्जुले प्रमेदिवसको दिन गीत सार्वजनिक गर्दै आफ्नो दर्शक तथा श्रोताहरुलाई भ्यालेन्टाइनको कोसेली भएको बताएकी छिन् ।
’मलाई आशा छ मेरो यो कोसेलीलाई..	पासाङको ‘तिम्रो यादमा’ सार्वजनिक	फागुन, काठमाडौं । गीतकार पासाङ तामाङको गीतिसंग्रह ‘तिम्रो यादमा’ सार्वजनिक गरीएको छ । पासाङको एकल शब्द तथा मनीपाल राईको एकल संगीत रहेको यस गीतिसंग्रह सोमबार केहि संगीतकर्मिहरुको बिचमा सामुहिक बिमोचन गरीएको हो । सोमबार अनामनगरस्थित विनायो क्याफेमा आयोजित बिमोचन कार्यक्रममा चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष शान्तिप्रिय, नेपाल सांगीतिक..	दिपक बराईलीको नयाँ गीत ‘तिम्रो लागी’ बजारमा (भिडियो)	फागुन ,काठमाडौं । गायक दिपक बराईलीले आफ्नो तिम्रो लागी बोलको नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । दिपकले आफ्नो पप् गीत तिम्रो लागीको युट्युव मार्फत भिडियो सहितको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पप् गीतको क्षेत्रमा संघर्ष गरीरहेका दिपकले यस भन्दा अघि पनि केहि गीतहरु बजारमा ल्याईसकेका छन् । सार्वजनिक यस गीतमा संगीत दिपक स्वयमले भरेका छन् भने शब्द हरी..	३ दर्जन कलाकार राप्रपामा प्रवेश	फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पुनः ३ दर्जन कलाकार प्रवेश गरेका छन् । सोमबार काठमाण्डौमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले टिका र माला लगाइदिएर कलाकारहरुलाई पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए ।
पार्टी प्रवेश गर्नेहरुमा कलाकार कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, रामचन्द्र अधिकारी, प्रदिप बाँस्तोला, सम्झना वुढाथोकी,..	श्वेताले श्रीकृष्णको जन्म जिल्ला सिुन्धुपाल्चोकमा एकिकृत वस्ति निर्माणमा सहयोग गर्ने	फागुन, काठमाडौं । अभिनेत्री श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकमा एकिकृत वस्ति निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । स्व. अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जन्म जिल्ला सिुन्धपाल्चोकको ठुलो शिरुवारीस्थित भूकम्पबाट प्रभावित झ्याँडी गाउँमा एकिकृत वस्ति निर्माणका लागि योजना सहयोग गर्ने बताएकी हुन् ।
सरकारले भूकम्प पीडितलाई आवास..	छोरीलाई सिनेमामा डेब्यु गराउन कस्सिईन् श्रीदेवी	फागुन, काठमाडौं । बलिउडमा एकताका खुबै चर्चामा रहेकि अभिनेत्री श्रीदेवीले आफ्नी छोरीलाई बलिउडमा प्रबेश गराउने कसरत गरिरहेकि छिन् । एक जमानाकि नम्बर वान बलिउड नायिका श्रीदेवीले आफ्नी जेठी छोरी जान्भीलाई एउटा चलचित्रमा काम गराउने लगभग फाईनल जस्तै भईसकेको छ । बलिउड संचार माध्यमका अनुसार श्रीदेवीले आफ्नी छोरीहरुलाई कडा अनुशासनमा राख्न..	मोडल सारिका र गायक दिपक बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकै हुन् त ? (भिडियो)	फागुन, काठमाडौं । मोडल सारिका केसी पछिल्लो समयकी ब्यक्ति मोडल हुन् । उनले दर्जनौं म्युजीक भिडियोहरुमा अभिनय गरीसकेकी छिन् । अन्य गीतहरु भन्दा बढी लोकगीतमा रुचाइएको उनको अभिनयको प्रसंसा उत्तिकै हुने गर्दछ ।
यसैक्रममा मोडल सारिका गायक दिपक धमालासँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी छन् । तर, उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध एक म्यूजिक भिडियोमा अभिनय..	करण जोहर र काजोलको सम्बन्धमा लाग्यो पुर्णविराम	फागुन, काठमाडौं । बलिउडका प्रसिद्ध निर्देशक तथा टेलिफिजन प्रस्तोता करण जौहर बिभिन्न समय बिभिन्न बिबादमा फस्दै आएका छन् । महिला र पुरुषका बिषयमा उनका बिभिन्न अभिब्यत्तीले पनि उनलाई कहिले बिबादमा तान्छ त हासोको पात्र बनाईदिन्छ । उनले एक भारतिय संचार माध्यमसंग कुराकानी गदै आफ्नो जिबनको केही विवादित प्रसंगमा खुलेर कुरा गरेका छन्..	Pages:«1234567...47»